2019-08-03 | Job Vacancy in Myanmar
2019-08-03 23:57:12 , Assistant Admin – Male/ Fema…
Assistant Admin – Male/ Female
Location : Hlaing Township
Salary : 2.5 to 3.5 Lakhs + Transportation
Company : Foreign Company
Working Times : 8:00 AM to 5:00 PM
– ဘွဲ့ ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
– အသက် ၂၅ နှစ်အောက် ဦးစားပေး။
– Admin ပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။
– အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
– ဂျပန်စာ သင်ချင်သောသူ ဖြစ်ရမည်။
Email : phoonawarradeinn2017@gmail.com
For more info, 09 7700 13072
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-08-03 by admin.
2019-08-03 23:56:13 ,
2019-08-03 23:56:00 ,Hot Pot ဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆေ…
Hot Pot ဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– Waiter/Waitress ကျား/မ (၂) ဦး အမြန်အလိုရှိသည်။
– Kitchen Helper ကျား/မ (၁) ဦး အမြန်အလိုရှဇိသည်။
– အ ခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်
– အသက် (၁၈) နှစ် မှ (၂၈) ကြား
– အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်
– အချိန်ပိုင်းဖြင့် အလှည့်ကျဆင်းနိုင်ရမည်(တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက် နားခွင့်ရှိပါသည်)
– ဗဟန်းမြို့နယ် ပုလဲကွန်ဒို တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
– (လစာ+OT+Allowance+ ရက်မှန်ကြေး)ခံစားခွင့်ရှိသည်။
ဖော်ပြပါအရည်အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် ကြော်ငြာသည့်နေ့မှ (၂)ပတ်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ လူကိုယ်တိုင် (သို့) Email ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
116, Thamine Station Road,Quarter 2, Mayan Gone.Yangon, Myanmar. Tel: 01- 9660772, 01-9661139
2019-08-03 23:55:58 , Urgent Need Position IT Ass…
Urgent Need Position
• တက္ကသိုလ် မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။
• သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂နှစ်ရှိရမည်။
• အသက် ၂၀ မှ ၃၀အတွင်းဖြစ်ရမည်။
• English (4)Skill ရှိရမည်။
01-9660 772, 01-966 1139
Location: No.116, Thamine Station Road, Quarter 2, Myayangone Township.
Apply : hr@wmgoc.com
2019-08-03 23:55:35 ,အလုပ်​အကိုင်​ အခွင့်​လမ်း​ကော…
အလုပ်​အကိုင်​ အခွင့်​လမ်း​ကောင်းများ ရှာ​ဖွေ​လိုသူများအတွက်​
1) Civil Engineer (3D) – M (350,000 ~ Nego)
– BE Civil ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ
– အသက်​ ၂၃ နှစ်​အထက်​ရှိသူ
– 3D ​ကျွမ်းကျင်​စွာ ​​ရေးဆွဲအသုံးပြုနိုင်​သူ
– လုပ်​ငန်းအ​တွေ့အကြုံ ၁ ~၂နှစ်​၀န်းကျင်​ရှိသူ
– AutoCAD 2D,3D အမှန်​တကယ်​ အသုံးပြုနိုင်​သူ ၊အင်​တာဗျူး အမြန်​၀င်​နိုင်​သူများသာ​လျှောက်​ထား​ပေး​စေလိုပါသည်​ ။
Industrial – Engineering Group Company(Interior Design )
Location – Hlaing Tsp
Working hrs :9:00am ~ 5:00pa(Mon-Fri)
9:00 am ~ 3:00pm (Sat)
Sun & public holiday – Off
– အင်​တာဗျူး အမြန်​၀င်​ရမည်​ ။
— Cv form ​ပေးပို့ရာတွင်​ လုပ်​ခဲ့ဖူး​သော Responsibilities များအား အပြည့်​အစုံ​ရေးသား၍ word file or pdf file များဖြင့်​သာ ​ပေးပို့​ပေးပါရန်​
2) Admin Assistant – F (Nego)
Age : 27-28
Computer skill : Microsoft word ( Excel : should be advanced)
Experience : at least (3) years
Industrial – Distribution Company
CV Form ကို လုပ်​ခဲ့ဖူး​သော responsibilities များအပြည့်​အစုံ​ရေးသားထား​သော word or pdf file များဖြင့်​သာ​ပေးပို့​ပေးပါရန်​ ။
3) Shop Manager – M/F (Nego)
Ø ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ အသက် (၃၀)နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။
Ø Minimart (or) Convenice Stroe တွင်လုပ်ဖူးသူ ဦးစားပေးမည်။
Ø သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။
Ø ဆိုင် တစ်ဆိုင်လုံးရှိ ၀န်ထမ်းပိုင်း အရောင်းပိုင်း ၊ ကုန်ပစ္စည်း အပိုင်း ၊အခင်းအကျင်းပိုင်း
Ø ၀န်ဆောင်မှုအပိုင်း ၊ကုန်ပစ္စည်းအ၀ယ်ပိုင်း ၊ သိုလှောင်မှု အပိုင်းအားလုံးအား ကောင်းမွန်စွာ ဦးဆောင်နိုင်ရမည်။
Ø Pressure အောက်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ပြီး ၀န်ထမ်းများအား ကောင်းစွာ handle လုပ်နိုင်ရမည်။
Ø ဆိုင်ရှိဝန်ထမ်းများအား စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အညီ အုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။
Ø Customer Complain စနစ်တကျကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်။
Ø အလုပ်ကို အချိန်ပေးဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး စည်းကမ်းလိုက်နာတတ်သူဖြစ်ရမည်။
Ø အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တတ်ရမည်။
အလုပ်ချိန် – 7:00 to 4:00
ပိတ်ရက် – တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်
လစာ – Basic + ရက်မှန်ကြေး+ အချိန်မှန်ကြေး+ Performance Allowance
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် (Distribution Company)
4) Sales & Marketing (Cosmetics) – F (Nego)
– အသက် ၂၅နှစ်-၃၅နှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။
– ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ု ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
– Cosmetics Sale အ​တွေ့အကြုံ2နှစ်​၀န်းကျင်​ရှိသူဖြစ်​ရမည်​ ။
– အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိ၍ ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
– ရုပ်​ရည်​​ပြေပြစ်​သူ ဖြစ်​ရမည်​။
– အပြင်​ထွက်​သွားလာနိုင်​သူဖြစ်​ရမည်​ ။
– အ​တွေ့အကြုံ​ပေါ်မူတည်​၍ လစာညှိနှိုင်း​ပေးနိုင်​ပါသည်​။
5) Government Relations Officer – M/F (Nego)
- Any Graduate
- Experience in related field of Government Relations.
- Proficiency in English (Writing and Speaking)
- Excellent in presentation ,communication and Interpersonal skills
– Report to – Management / Corporate Manager
–  Responsible for establish strong relation with – – Ministry of Health and Sports, Ministry of
Social Welfare Relief and Resettlement, Myanmar Investment Commission, Yangon City
– Development Committee and related government authorities.
- Liaison with concerned Ministries and perform all the related business matter for government relation in all levels.
- Occasionally, travel to Nay Pyi Taw for attending business related meeting and liaise with
Industrial – Healthcare Consultant Company
6) Japanese Teacher(N3/N2) – F (350,000 ~Above)
_ Must be gratuated with any gratuate
_ Must be JLPT N2 or N3 holder
_ Age 28~ 35 between
_ office time -( 9:00 to 5:00) Monday to Friday
_ Saturday (half)
_ Gazette holiday & Sunday Close
_ Includes lunch
Job Location – Latha Tsp
Industry – Oversea Japan Agency
7) Japanese Interpreter (N1/N2) – M/F
( 600,000 ~ Above)
2. Related experience in office environment.
3. Japanese4skills required, equivalent N1/N2/N3.
Job Location – Tamwe Tsp
Industry – Oversea Employment (Japan) Company
8) Junior Warehouse Staff – M (150,000 ~Nego)
– ဆယ်တန်းအောင် (သို့) အ ဝေးသင်တက်နေသူ
– Warehouse ပိုင်း အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်။
– အလေးအပင် မနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
– OT ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
– အသက် (၂၇)နှစ်အောက်
– လစာ (၁၅၀၀၀၀ )ကျပ်ဝန်းကျင်
Working Time : 8:30 am to 5:00 pm ( Monday to Saturday ),Off Day : Sunday and Gazette Holiday
Saturday (alternative off)
Location :Ahlone Tsp
Industrial : Retail/Distribution Compnay(Foreign)
9) ဒဂုံ မြို့နယ်​ရှိ နိုင်​ငံခြားတက္ကသိုလ်​ကျာင်းတွင်​ တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရန်​
👉 သန့်​ရှင်း​ရေး – မ (150,000 ~ ညှိနှိုင်း)​
Viber 09 443427711 သို့ cv form အမြန်​ ​ပေးပို့​လျှောက်​ထားနိုင်​ပါသည်​ ။
သန့်​ရှင်း​ရေး – မ (150,000 ~ ညှိနှိုင်း)​
အမှန်​တကယ်​ အင်​တာဗျူး ၀င်​​ပေးနိုင်​သူများသာ​လျှောက်​ထားပါရန်​ ။
မိမိနှင့်​ကိုက်​ညီ​သောအလုပ်​အကိုင်​​ကောင်းများအား အမြန်​ရှာ​ဖွေ​လျှောက်​ထားနိုင်​ပါပြီ​နော်​ …..
👉Job Trust Facebook Page ကို like & follow လုပ်​ထားခြင်းဖြင့်​ အလုပ်​အကိုင်​ အခွင့်​အလမ်းသစ်​များအား ​နေ့စဉ်​ အခမဲ့ ရှာ​ဖွေနိုင်​ပါတယ်​​ 👈
2019-08-03 23:54:50 ,မင်္ဂလာရှိ​သော ​နေ့ရက်​များစွာကု…
သြဂုတ်လ​အတွက်​ ​ထပ်မံ​ခေါ်ယူလျက်​ရှိ​သော လစ်​လပ်ရာထူးပေါင်းများစွာကို #NEW_LIGHT_Agency မှ ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါသည်​။ ၇လပိုင်းကုန်​လို့ ၈လပိုင်းအစမှာ အလုပ်​အမြန်​လိုချင်​တယ်​ဆိုရင်​ CV တစ်​စုံစာအချက်​အလက်​အပြည့်​အစုံသာ ယူခဲ့ပြီးအလုပ်​ဝင်​လိုက်​ပါ 💯💯💯 `NEW LIGHT Agency´ တွင် ကုမ္ပဏီကြီးများမှ လက်ရှိလိုအပ်သော ရာထူး​ကောင်းများစွာကို သြဂုတ်​လ ၁ရက်​​နေ့မှ ၁၈ရက်​​နေ့ထိ ၀န်ထမ်းများစိတ်တိုင်းကျ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်
ရန်ကုန်မြို့နယ်​ရှိ ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်​ ချိတ်​ဆက်​ထားသည်​ဖြစ်​၍ မိမိ​နေထိုင်​ရာမြို့နယ်​နှင့်​ နီးစပ်​ရာလုပ်​ငန်းများနှင့်​သာ ချိတ်​ဆက်​​ပေးပါသည်​။ သင့်​ဘက်​ကသာ အင်​တာဗျူးတကယ်​ဝင်​နိုင်​ဖို့ ကတိ​ပေးလိုက်​ပါ 😍
​နေ့စဉ်​နှင့်​အမျှ​ခေါ်ယူလျက်​ရှိ​သော ရာထူး​ကောင်းများစွာကို ​သိရှိလိုပါက NEW LIGHT Local Employment Agency Page သို့ဝင်​​ရောက်​ပြီး Like & Follow နှိပ်​ထားနိုင်​ပါသည်​။
🎉🎉🎉 🎉🎉🎉 🎉🎉🎉 🎉🎉🎉 🎉🎉🎉
(1) Junior Accountant – ကျား/မ (၇၀)ဦး….၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/ LCCI (II)ပြီး
(2) Senior Accountant – မ (၄၇)ဦး….ဘွဲ့ရ/ LCCI (III) ပြီး/ Exp ၄နှစ်​
လစာ – ၅သိန်း မှ ၉သိန်းဝန်းကျင်​
(3) Chief Accountant – မ (၂၀)ဦး….ဘွဲ့ရ/ LCCI (III)ပြီး/ ACCA (1,2) ပြီး/ Exp ၁၀နှစ်​
လစာ – ၁၀သိန်း မှ ၁၂သိန်းဝန်းကျင်​
(4) Promotion Girl – မ (၈၀)ဦး….ပညာအရည်​အချင်းမလိုပါ။
လစာ – ၁သိန်းခွဲ ဝန်းကျင်​
(5) Sale Promoter – ကျား/မ (၆၃)ဦး….၁၀တန်း (သို့)
လစာ – ၁သိန်း ၈​သောင်း မှ ၂သိန်းခွဲ ဝန်းကျင်​
(6) Marketing Assistant – ကျား/မ (၉၉)ဦး….၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ
လစာ – ၂သိန်း မှ ၂သိန်းခွဲဝန်းကျင်​
(7) Sale Teams Leader – ကျား/မ (၅၀)ဦး….၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/ Exp ၁နှစ်​​ကျော်​
လစာ – ၂သိန်း ၂​သောင်း မှ ၂သိန်း ၈​သောင်းဝန်းကျင်​
(8) Delivery – ကျား/မ (၄၃)ဦး….ပညာအရည်​အချင်းမလိုပါ။
လစာ – ၁သိန်းခွဲဝန်းကျင်​
(9) Senior Media Marketing – ကျား/မ (၃၀)ဦး….၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/ Exp ၁နှစ်​
လစာ – ၂သိန်း မှ ၄သိန်းဝန်းကျင်​
(10) Sale & Marketing Supervisor – ကျား/မ (၆၀)ဦး….၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/ Exp ၂နှစ်​​ကျော်​
လစာ – ၃သိန်း မှ ၄သိန်းခွဲဝန်းကျင်​
(11) Sale & Marketing Executive – ကျား/မ (၄၂)ဦး….ဘွဲ့ရ/ Exp ၄နှစ်​​ကျော်​
(12) Sale & Marketing Manager – ကျား/မ (၃၉)ဦး….ဘွဲ့ရ/ Exp ၆နှစ်​
လစာ – ၇သိန်း မှ ၁၂သိန်းဝန်းကျင်​
(13) Office Staff / Customer Service – ကျား/မ (၇၀)ဦး….၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/ Computer Basic ရ
(14) HR & Admin Staff – ကျား/မ (၄၀)ဦး….ဘွဲ့ရ/ Certificate ရှိ/ Exp ၁နှစ်​
လစာ – ၂သိန်း ၃​သောင်း မှ ၃သိန်းဝန်းကျင်​
(15) HR & Admin Supervisor – ကျား/မ (၃၈)ဦး….ဘွဲ့ရ / Certificate ရှိ/ Exp ၃နှစ်​
(16) HR & Admin Manager – ကျား/မ (၃၀)ဦး….ဘွဲ့ရ/ Certificate ရှိ/ Exp ၇နှစ်​
(17) Translators (English, Chinese, Japanese) – ကျား/မ (၅၀)ဦး….လစာ – ၃သိန်း မှ ၇သိန်းဝန်းကျင်​
(18) Modern Trade Supervisor – ကျား/မ (၅၀)ဦး….ဘွဲ့ရ/ Exp ၂နှစ်​
လစာ – ၂သိန်းခွဲ မှ ၄သိန်းခွဲဝန်းကျင်​
(19) Tele Marketing – ကျား/မ (၆၀)ဦး….၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ
လစာ – ၂သိန်း မှ ၂သိန်းခွဲ ဝန်းကျင်​
(20) Export & Import Officer – ကျား/မ (၄၅)ဦး….ဘွဲ့ရ/ Exp ၂နှစ်​
လစာ – ၂သိန်းခွဲ မှ ၅သိန်းခွဲ ဝန်းကျင်​
(21) Store & Logistics Staff – ကျား/မ (၅၂)ဦး….၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ
လစာ – ၁သိန်း ၇​သောင်း မှ ၂သိန်းခွဲဝန်းကျင်​
(22) Store Supervisor – ကျား/မ (၃၀)ဦး….ဘွဲ့ရ/ Exp ၃နှစ်​
(23) Cashier – ကျား/မ (၅၀)ဦး….၁၀တန်း (သို့) ​အောင်​
လစာ – ၁သိန်းခွဲ မှ ၂သိန်းခွဲ ဝန်းကျင်​
(24) Digital Marketing/ Content Writer – ကျား/မ (၇၀)ဦး….၁၀တန်း​အောင်​ (သို့) ဘွဲ့ရ/ Exp ၁နှစ်​
(25) Waiter / Waitress – ကျား/မ (၄၀)ဦး….ပညာအရည်​အချင်းမလိုပါ။
(26) Engineer (Civil, Mechanical, EP, EC, IT) – ကျား/မ (၄၂)ဦး….လစာ – ၂သိန်း မှ ၁၀သိန်းဝန်းကျင်​
– မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊အိမ်​​ထောင်​စုစာရင်းမိတ္ထူ 📜 တို့နှင့်တကွလူကိုယ်တိုင် (သို့)​ ကိုယ်​စားလာလျောက်ရပါမည်။​ ​ဖောင်ကြေး (၇၀၀၀)ကျပ်တစ်ခါသာသွင်းပြီး Register လုပ်​ရပါမည်။အလုပ်မရမချင်းရှာပေးပြီး ရလျှင်မည်သည့်
🕘 ၇ုံးချိန်​ – နံနက်(၉)ခွဲမှ(၅)ထိဖွင့်သည်။ အခါကြီးရက်​ကြီးများမှလွဲ၍ ပိတ်​ရက်​​မရှိပါ။
2019-08-03 19:17:24 ,သြဂုတ်လ ၂၀၁၉ ( August 2019 – P…
သြဂုတ်လ ၂၀၁၉ ( August 2019 – Part2) အတွက် Job Position – ( ၅၀ ) မျိုး – သတ်မှတ် အရည်အချင်းကိုက်ညီပါက တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ပြီး ဆယ်ရက်အတွင်း အလုပ်ရပါမည်။
၁) Site Sr –M & E Engineer (Urgent Require) – ကျား – ( ၃ ) ဦး – လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) ( လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ ) – ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ။
-BE( EP) ဖြစ်ရမည်။Site များနှင့်ညှိနှိုင်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
– ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Sr- Engineerအတွေ့ ကြုံအနည်းဆုံး(3-5)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ -အထပ်မြင့်ပိုင်းလုပ်ငန်းအတွေကြုံရှိရမည်။အသက်(30-45)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
၂) Site Sr – Engineer (Urgent Require) – ကျား – ( ၃ ) ဦး – လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) ( လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ ) – ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ။
-BE(Civil) ဖြစ်ရမည်။Site များနှင့်ညှိနှိုင်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
၃) Mechanic (Urgent Require) – ကျား – (၄) ဦး – လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) ( လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ ) – သုဝဏ္ဍမြို့နယ် ။
သေချာစစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ လုပ်သက်( ၃ )နှစ်အထက်ယာဉ်ကြီး/ငယ်ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။
– BE(Mechanical ) or Diploma in (Mechanical)ဘွဲ့ ရသူ ဖြစ်ရမည်။
၄) Site M & E Engineer (Helper) (Urgent Require) – ကျား – ( ၃ ) ဦး – လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) ( လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ ) – ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ။
– ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (ရေ & မီး)အကူအတွေ့ ကြုံအနည်းဆုံး(2)နှစ်အထက်ရှိရမည်။
– စက်မှု ၀န်ကြီးဌာန ( EI ) လက်မှတ်ပါရမည်။
၅) Site Accountant /Jr-Accountant – မ – ( ၄ ) ဦး – လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း )~ ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) ( လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ ) – ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ။
-ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။LCCI( 2/3 ) အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။
– ဆောက်လုပ်ရေးစာရင်းလုပ်ငန်းအတွေ့ ကြုံအနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။
– လျှောက်ထားလိုသူများသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရှိသူများသာလျှောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။
၆) Sales Staff – Male – ကျား – ( ၁၀ ) ဦး – လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) – ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ။
• စက်ဆီ ၊ ချောဆီ အရောင်းပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည် ။
• ဘွဲ့ရ ( သို့ ) ကျောင်းကိစ္စ ကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည် ။
• အသက် ( ၂၀ ) နှစ်အထက်ရှိရမည် ။
• အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီ မှ ညနေ ( ၅ ) နာရီ
• တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်ပါသည် ။
• စက်ဆီ ချောဆီများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။
၇) Secretary – အတွင်းရေးမှူး – Female – (5) Posts – လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် – အင်းစိန်မြို့နယ် ။
• Engineer ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။
• အတွင်းရေးမှူးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ လုပ်သက် အနည်းဆုံး ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည် ။
• အသက် ( ၂၅ ) နှစ်အထက်ရှိရမည် ။
• ဘိလပ်မြေများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၈) Finance Analysis – Female – (5) Posts – လစာ – ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) – လှိုင်မြို့နယ်။
• CPA Part (2)
• Finance Manager ရာထူးဖြင့်လုပ်သက် အနည်းဆုံး ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည် ။
• Finance Analysis များပြုလုပ်နိုင်ရမည် ။
• BCom ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။
• တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်ပါသည် ။
• လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရပါမည် ။
၉) Recruitment Specialist – Female – (5) Posts – လစာ – ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) – လှိုင်မြို့နယ် ။
• ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။
• HR Diploma ( သို့ ) Certificate ရှိရမည် ။
• လူမူ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည် ။
• HR Manager ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်သက် အတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည် ။
• တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ပိတ်ပါသည် ။
• လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရပါမည်။
၁၀) Sales Admin – Male/Female – (5) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် – ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ။
• သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။
• Computer Word , Excel ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်မည်။
• အလုပ်ချိန် ( 8:30 – 5:15 )
• စနေတစ်ပတ်ခြားပိတ်သည်။ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
• FMCG Trading Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၁၁) Sales Representative – Male – ( 10 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် +++ / တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ။
• ဘွဲ့ရ (သို့) ဆယ်တန်းအောင်၍ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။
• FMCG အရောင်းပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ် ရှိရမည်။
• အသက် (၂၀)နှစ် ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။
• အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM – 5:15 PM )
၁၂) တရုတ်ဘာသာပြန် – ကျား ၊ မ – ( ၁၀ ) ဦး – လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) – လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။
• တရုတ်စာ ရေး၊ ဖတ် ၊ပြော ရရမည် ။
• တရုတ်ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ လုပ်သက် ( ၂ ) နှစ်အနည်းဆုံးရှိရမည်။
• အလုပ်ချိန် မနက် ( ၈ : ၃၀ ) မှ ညနေ ( ၅ ) နာရီ
• စနေနေ့တစ်ဝက်ပိတ်ပါသည် ။ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်ပါသည် ။
• ဖယ်ရီရှိသည် ။
• အထည်ချုပ်စက်ရုံ ကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၁၃) Japanese Teacher – ဂျပန်ဆရာ – Male / Female – (7) Posts – လစာ – ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) – ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ။
• N2 Passed
• ဂျပန်စာသင်ကြားဖူးသည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည် ။
• ဂျပန်ဆရာ ဆိုလျှင် ပိုသင့်တော်သည် ။
၁၄) Hotel Manager – Male / Female – (5) Posts – လစာ – ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) – ကျောက်မြောင်း ၊ တာမွေမြို့နယ် ။
– ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။
– အသက် ( ၃၀ ) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည် ။
– Hotel Manager လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ လုပ်သက် ( ၃ ) နှစ်အထက်ရှိရမည် ။
– Hotel and Tourism Management Certificate ( or ) Diploma ရှိသူဖြစ်ရမည် ။
– Hotel တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။
၁၅) Waiter and Waitress – ကျား ၊ မ – ( ၃၀ ) ဦး – လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) – ဗဟန်းမြို့နယ်။
• ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည် ။
• Waiter / Waitress လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိရမည် ။
• Routine Shift အဆိုင်းဖြင့်အလုပ်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။
• အဆောင်နေနိုင်သူ အဆောင်စီစဉ်ပေးသည် ။
• ထမင်းကျွေးသည် ။ ယူနီဖောင်းပေးသည် ။
• ကော်ဖီ နှင့် စားသောက်ဆိုင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။
၁၆) Cutting Manager – Female – (3) Posts – လစာ – ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် – တာမွေတွင်အင်တာဗျူးဝင်ရမည် ။ တောင်ဒဂုံတွင်အလုပ်လုပ်ရမည် ။
• အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်အထက်ရှိရမည် ။
• စက်ရုံပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည် ။
• အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီ မှ ညနေ ( ၆ ) နာရီ
•Fashion ကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။
၁၇) Office Staff – Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၁၆၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ။
• ဘွဲ့ရ (သို့) ဆယ်တန်းအောင်၍ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။
• သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၆)လ ရှိရမည်။
• Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ( Microsoft Office – Excel , Word )
• နေ၊စား၊ငြိမ်း နေလိုပါက စီစဉ်ပေးမည်။
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
• အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
၁၈) Warehouse Executive – Male – (5) Posts /လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
• သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည်။
• Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
• အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
• စနေနေ့တစ်ပတ်ခြားနှင့် တနင်္ဂနွေ ၊အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်သည်။
• တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Fashion Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
၁၉) Sales & Marketing Staff – Female – (5) Posts /လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။
• အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၃၀ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
• အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်အထက်ရှိ ရမည်။
• Building material / Floor များကိုရောင်းချနိုင်ရမည်။
• အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၆ နာရီအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
• စနေနေ့တ၀က်နှင့် တနင်္ဂနွေ ၊အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
• သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Engineering Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
၂၀) သန့်ရှင်းရေး – မ – ( ၅ ) ဦး /လစာ – ၁၃၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ ရန်ကင်း မြို့နယ်။
• ရုံးသန့်ရှင်းရေးကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
• အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။
• အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
• တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
• ရန်ကင်းမြိုနယ် ရှိ Engineering Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၂၁) Sales Manager / Assist Sales Manager ( Construction Materials Flooring ) – Male – (5) Posts – လစာ – ညှိနှိုင်း ( လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ ) – ကမာရွတ်မြို့နယ် ။
– ကြမ်းခင်း ၊ ပါကေး ၊ ကြွေပြား ၊ ကျောက်ပြားများ ရောင်းခဲ့ဖူးသည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည် ။
– Sales Target မှီအောင်ရောင်းချနိုင်ရမည် ။
– ခရီးသွားလာနိုင်ရမည် ။
– ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိရမည် ။ ကားမောင်းနိုင်ရမည် ။
– အင်္ဂလိပ် စကားပြောဆိုနိုင်ရမည် ။
– Floor Decking Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
– To promote our products to potential customers ( Developer , construction company , architect , interior designer , landscaping company and wholesaler like Home Pro1 )
– To identify and promote our products to potential distributors outside Yangon .
– To understand the market and feed back competitor information to the management
– To meet monthly sales target
– To submit daily activities report to the management
– To collect payment promptly and monitor the debtor aging closely
– To follow up for good delivery
၂၂) Supervisor ( IT Department ) – Male /Female – (5) Posts /လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် ( အထက်) / ကမာရွတ်မြို့နယ်။
• ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ ( IT ပိုင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်)
• Computer ကို ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ( Microsoft Word,Excel ) ကျွမ်းကျင်ရမည်။
• မိမိတာဝန်ယူထာသည့် အလုပ်ပတ်သက်၍ အပြည့်အ၀ တာဝန် ယူနိုင်ရမည်။
• လုပ်ငန်းစည်းကမ်းလိုက်နာပြီး စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင် ရမည်။
• နယ်ခရီးရှည်ထွက်နိုင်သူဖြစ်ပြီး နေ့ည မရွေးတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• Production ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။
• အသက် ၂၅ မှ ၃၅ အတွင်းဖြစ်ရမည်။
• ကမာရွတ်မြို့နယ် ရှိ Media Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၂၃) Store Accountant – Female – (5) Posts /လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
• LCCI Level (2) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။
• သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိရမည်။
• Computer Word,Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။
• အသက် ၂၅ မှ ၃၀ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
• အလုပ်ချိန် မနက် ၈ နာရီခွဲမှ ညနေ ၅ နာရီအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
• စနေ တပတ်ခြား နှင့် တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်သည်။
• မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရှိ Lubricant Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရပါမည်။
၂၄) Store Keeper –Male/ Female – (5) Posts /လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
• စတိုပစ္စည်း အ၀င်အထွက်လုပ်နိုင်ရမည်။
၂၅) Assistant Sales Manager / Senior Sales Executive – Male – (5) Posts – လစာ – ညှိနှိုင်း ( လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ ) – မန္တလေး ။
– စက်ဆီ ၊ ချောဆီ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၁ ) နှစ်အထက် ရှိရမည် ။
– Sales Target များမှီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် ။
– Microsoft Words , Excels , PowerPoints များအသုံးပြုနိုင်ရမည် ။
– အင်္ဂလိပ်စကား ပြောဆိုနိုင်ရမည် ။
– ကားမောင်းနိုင်ရမည် ။ ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိရမည် ။
– စက်ဆီ ၊ ချောဆီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။
– To develop market for our lubricant products in Mandalay and upper Myanmar area
– To promote and secure sales from car workshops , spare parts shops & fleet users
၂၆) Cleaning Supervisor (သန့်ရှင်းရေးခေါင်းဆောင် ) – Male/ Female – (5) Posts /လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။
• Hotel ပိုင်းတွင် လုပ်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။
• သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမား အယောက် ( ၂၀ ) ကို အုပ်ချုပ်နိုင် ရမည်။
• အသက် ၂၅ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။
• အလုပ်ချိန် မနက် ၈ နာရီခွဲမှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
• မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၂၇) Sales & Marketing Executive – Male/Female – (5) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / လသာမြို့နယ် ။
• သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။
• သင်္ဘောလိုင်းကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ခဲ့ဖူးသူဦးစားပေးမည်။
• Freight Forwarding ၊ သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
• အလုပ်ချိန် ( 9:00 AM – 5:00PM)
• တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
• လသာမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၂၈) Nurse – Female – (5) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ – ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိုနှိုင်း) / လမ်းမတော်မြို့နယ် ။
– ၁၀တန်းအောင် (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။
– ဆေးရုံကြီးများတွင် သူနာပြု အနေဖြင့် လုပ်သက်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
– လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ Foreign ဖက်စပ်ဆေးရုံကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၂၉) Senior Web Developer – Male – (5) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ – ၄၀၀,၀၀၀၀ ကျပ် (ညှိုနှိုင်း) / လှိုင်မြို့နယ် ။
– တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်အထက်ရှိရမည်။
– အလုပ်ချိန် 8:AM to 5:30AM
-Saturday , Sunday and Public Holiday Off
– လှိုင်မြို့နယ်ရှိ IT Comapny ကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၃၀) Machine Operator – Male – (5) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်(ညှိနှိုင်း) / ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်။
– အသက် (၂၀)နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
– အလုပ်ချိန် 8:30AM – 5:30PM
– တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။
– ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ FMCG Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၃၁) Import Staff – Female – (5) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / အင်းစိန်မြို့ နယ်။
– တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။
– အသက် (၂၅) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။
– Computer ရရမည်။
– Import Staff ပိုင်းအတွေ့ အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။
– အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းပိုင်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
– အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း Showroom တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၃၂) Marketing Staff – Male (5) Posts /လစာ – ၁၈၀,၀၀၀~၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /အင်းစိန် မြို့ နယ်။(နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်)
– တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။
– အသက် (၂၀ မှ ၂၅) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။
– Marketing Staff လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ(၂) နှစ်ရှိရမည်။
၃၃) HR Agent – မ – ( ၇ ) ဦး – လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) – ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။
• အထက်တန်းအောင်ဖြစ်ရမည် ။
• ကွန်ပြူတာ မြန်မာ Typing / English Typing ရိုက်နိုင်ရမည် ။
• ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။
• ရိုးသားမှု့ရှိပြီး ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။
• ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည် ။
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်း လျောက်ထားနိုင်သည် ( အဓိက ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုနိုင်ရမည် ။ )
• ဘွဲ့ရရန် မလိုအပ်ပါ ။
• Training ပြန်ပေးသည် ။
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။
• အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည် ။
၃၄) အိမ်အကူ – မ – ( ၃ ) ဦး – လစာ – ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် – ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။
– အိမ်တွင်နေစားငြိမ်းနေနိုင်ရမည် ။
– စာရိတ္တကောင်းသူဖြစ်ရမည် ။
– အိမ်အလုပ်များကူလုပ်နိုင်ရမည် ။
– အ၀တ်လျော် ၊ မီးပူတိုက် ၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမည် ။
– အပင်စိုက်ဖူးသူပိုအဆင်ပြေသည် ။
၃၅) Purchasing Executive – Female – (5) Posts /လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / တာမွေမြို့နယ်။
• Computer ( Word,Excel,Internet & Email ) ကျွမ်းကျင် စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
• Purchaser ပိုင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။
• English စကားအနည်းငယ်ပြောနိုင်ရမည်။
• Working Hours – 8:30 AM to 5:00 PM
• တာမွေမြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၃၆) Tenants & Leasing Manager – Female – (5) Posts /လစာ – ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် /တာမွေမြို့နယ်။
• Must be graduate & must have at least (5) Years experiences in leasing & tenants
• Must ba able to work in and out of office and must have knowledge of housing rules
• Must have strong communication skill
• Good personality ,Negotiation skills and smart person\_
၃၇) QS Engineer – Female – (5) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။
• သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ် ရှိရမည်။
• Condition တွက်နိုင်ရမည်။
• Auto CAD 2D,3D ကျွမ်းကျင်ရမည်။
• အလူမီနီပိုင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
• အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM – 5:30 PM )
• သမိုင်းလမ်းဆုံထိ ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
• လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Aluminum Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၃၈) Store Account – Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။
• Peachtree Software အသုံးပြုဖူးသူဦးစားပေးမည်။
• ၈မိုင်လမ်းဆုံထိ ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။
၃၉) Store Account – Female – (5) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀~၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / သာကေတမြို့ နယ်။
– LCCI Level I , II အောင်မြင်ပီးသူဖြစ်ရမည်။
– အသက်(၂၅) နှစ်မှ (၃၅)အတွင်းဖြစ်ရမည်။
– Computer Excel ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
– ဂိုထောင်ရှိပစ္စည်းအဝင်စာရင်းအထွက်စာရင်းများအားကျွမ်းကျင် စွာလုပ်ကိုင်နိုင် သူဖြစ်ရမည်။
– Store ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်ရှိရမည်။
– အလုပ်ချိန် ( 9:00 AM – 5:00PM)
– သာကေတမြို့နယ်ရှိ Stationery Distribution Co.,Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၄၀) Admin Staff – Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။
• ဆယ်တန်းအောင်၍ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိသူများလဲ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
• Computer Word , Excel , Email & Internet ကျွမ်းကျင်ရမည်။
• အလုပ်ချိန် ( 7:00 AM – 5:00 PM ) & ( 11:00 AM – 8:00 PM ) အဆိုင်းဖြင့် အလှည့်ကျ ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• စနေ၊တနင်္ဂနွေ မှလွဲ၍ တပတ်တစ်ရက်နားရမည်။
• အလုပ်ခန့်ပြီး (၃) လ ပြည့်လျှင် English စာသင်တန်း အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
၄၁) Marketing Staff – Female – ( 10 ) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း) / စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။
• အလုပ်ချိန် ( 7:00 AM – 5:00 PM ) & ( 11:00 AM – 8:00 PM ) အဆိုင်းဖြင့် အလှည့်ကျဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၄၂) Production Supervisor – Male – ( 10 ) Posts / လစာ – ၂၅၀,၀၀၀~၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /ထောက်ကြန့် မြို့ နယ်။
– အသက် (၃၀) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။
– Production Supervisor လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။
– စက်ရုံ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
– အလုပ်ချိန် အဆိုင်းဖြင့် ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
– တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။
၄၃) Graphic Designer – Male – (5) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် – ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။
• Design ပိုင်းအနည်းဆုံး (၂)နှစ် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
• Photoshop, Illustrator, Video Editing နှင့် Pamphlet / Flyers များ Design တတ်ကျွမ်းရမည်။
• ယခင်လုပ်ခဲ့ဖူးသော Design များကို တင်ပြနိုင်ရမည်။
• Deadline များမီအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• Events & Entertainment အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
• အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM – 5:00 PM )
• ယူနီဖောင်းရှိသည်။ ဖယ်ရီရှိသည်။
• တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်သည်။
၄၄) Showroom Leader – Female – (5) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ဗဟန်းမြို့ နယ်။
– တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။
– အသက်(၂၅ မှ ၃၀) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
– Management နှင့်သက်ဆိုင်သောသင်တန်းတစ်ခုခုပြီးရမည်။
– Showroom Leader လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။
– အလုပ်ချိန် နှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်(7:00 AM to 3:30 PM ) မှ (1:00 PM to 9:30 PM)
– FMCG အတွေ့ အကြုံရှိရမည်။
၄၅) Sales Representative – Male – (10) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် +++ / တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ။
၄၆) Showroom Sales Staff – Male /Female – (5) Posts/ လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
– အဝေးသင်ဖြင့်ကျောင်းဆက်မတက်သူများလျှောက်ထားနိုင် သည်။
– အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်အထက်ရှိရမည်။
– အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေး မည်။
၄၇) Sales Staff – Male /Female – (5) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ရှိ Construction Material Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၄၈ ) Operation Staff – Male/Female – ( 10 ) Posts /လစာ – ၁၇၅,၀၀၀ ကျပ် + Travel Allowance /ဗဟန်းမြို့နယ်။
– Computer Word,Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
– Call Center ပိုင်း (သို့) ငွေကိုင်သည့်အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
– သန်လျင်တွင်နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။
– အင်တာဗျူးဖြေလျှင် ဗဟန်းတွင်ဖြေရမည်။
– အသက် (၂၆)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
– တပတ် (၂) ရက် ကြားရက်ပိတ်သည်။
– အင်တာဗျူး (၃)ကြိမ်ဝင်ရမည်။
– Microfinance Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
၄၉ ) Tele Marketing Staff – Male/Female – (5) Posts /လစာ – ၁၇၅,၀၀၀ ကျပ် + Travel Allowance /ဗဟန်းမြို့နယ်။
– Tele Marketing ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။
၅၀ ) Chief Accountant – Female – (5) Posts /လစာ – ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် (အထက်)/မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
– BCom ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
– CPA (or) ACCA ပြီးထားသူဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်ရှိရမည်။
– Computer Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Phone Number – 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785
ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
မင်္ဂလာပါရှင် ။ ကျွန်မတို့ G A S အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီမှ ယခု သြဂုတ်လ 2019 အတွက် မြန်လိုအပ်လျက်ရှိသော ရာထူး( ၅၀ ) မျိုး – Job Position ( ၅၀ ) မျိုး – သြဂုတ်လ ၂၀၁၉ ( August – Part2) ကိုအစဉ်လာမပြတ် အထက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။လစာများကတော့ ရာထူး ( Job Position ) အလိုက် အခြေခံလစာမှစ၍ လစာ ၁၀ သိန်းကျော်အထိ ပါရှိပါသည် ။ Your Success Is Our First Priority. Your Bright Future Ahead With GAS Recruitment. ။
လူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့ လာရောက် CV ပေးပို့ပါက အင်တာဗျူး ချက်ချင်း မြန်ပါလိမ့်မယ်ရှင့် ။
CV တင်သည့်အခါတွင် လျောက်ထားလိုသည့် ရာထူးနှင့် မြို့နယ်ကို တစ်ပါတည်း ဖေါ်ပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။အမြန်လိုအပ်နေသည့် ရာထူးများ ဖြစ်ပါသည် ။
သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီပါက တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူး ၀င်ပြီး ဆယ်ရက်အတွင်းအလုပ်ရနိုင်ပါသည် ။
၀န်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန် လုံးဝ မလိုအပ်ပါ ။
2019-08-03 19:07:20 ,မန္တလေးမြို့အတွက် ယခု သြဂုတ်လ ၂…
မန္တလေးမြို့အတွက် ယခု သြဂုတ်လ ၂၀၁၉ ( August 2019 – Part 1) အတွက် Job Position – ( ၄၈ ) မျိုး – သတ်မှတ်အရည်အချင်းကိုက်ညီပါကတစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ပြီးဆယ်ရက်အတွင်းအလုပ်ရပါ မည်။
၁) Office Staff – Female – (5) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် / ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
– ဘွဲ့ရရှိထားသူ (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
– အသက် (၃၃) နှစ်အောက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
-ကွန်ပျူတာ မြန်မာ ၊အင်္ဂလိပ် လက်ကွက် ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။
၂) Senior Site Engineer– Male – (5) Posts / လစာ – ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်~ ၈၀၀,၀၀၀ကျပ်(ညှိနှိုင်း) / ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
– အသက် (၃၅) နှစ်အောက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၃) Sales Representative – Male / Female – (5) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ (သို့ ) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
– FMCG ပိုင်း အတွေ့ အကြုံ (၁)နှစ်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– အသက် (၂၅)နှစ်အောက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၄) Assistant Technician – Male – ( 10 ) Posts / လစာ – ညှိနှိုင်း / ချမ်းမြသာစည်မြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ (၁)နှစ်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– အသက် (၃၀)နှစ်အောက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– နယ်ထွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
၅) Marketing Executive – Male/Female – (5) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်(ညှိနှိုင်း) / အမရပူရမြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
– တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
– Construction ပိုင်းတွင် Marketing ပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။
– နေ ၊ စား ၊ ငြိမ်း စီစဉ်ပေးမည်။
– ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သူ ဖြစ်ရမည်။
၆) Site Engineer – Male – (5) Posts / လစာ – ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
– BE(Civil) ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
၇) Sales & Marketing Staff – Male / Female – (5) Posts / လစာ – ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မဟာအောင်မြေမြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
– တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
– အသက် (၂၈) နှစ်အောက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– Car Showroom ပိုင်းတွင် marketing ပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်ရှိရမည်။
– ရုပ်ရည် သန့်ပြန့်သူ ဦးစားပေးမည်။
၈) လက်မှတ်အရောင်း – မ – ( ၅ ) ဦး / လစာ – ညှိနှိုင်း / ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ(၁)နှစ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– အိမ်ထောင်မရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– စကားပြောချိုသာ၍ သွက်သွက်လက်လက်ရှိ်သူ ဖြစ်ရမည်။
– မန္တလေး ၊ ရန်ကုန် ၊ လားရှိုး ဂိတ်များတွင် နေနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
၉) ကုန်စာရင်းကိုင် – မ – ( ၅ ) ဦး / လစာ – ညှိနှိုင်း / ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
၁၀) ယာဉ်မယ် – မ – ( ၅ ) ဦး / လစာ – ညှိနှိုင်း / ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– ရုပ်ရည်အသင့်အတင့် ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– ခရီးသွားနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
၁၁) Sales Staff– Female – (5) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် / ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
– တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူ(သို့မဟုတ်)ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
၁၂) Accountant– Female – (5) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်(ညှိနှိုင်း) / ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။
– LCCI I,II အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။
– အသက် (၃၀) နှစ်အောက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၃) သန့်ရှင်းရေး – မ – ( ၅ ) ဦး / လစာ- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် / မဟာအောင်မြေမြို့နယ် /မန္တလေးမြို့။
– အသက်(၃၅)နှစ်ဝန်းကျင်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရှိရမည်။
– အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၄) .Marketing Executive- Male / Female – (5) Posts / လစာ- ၃၅၀၀,၀၀ ကျပ်နှင့်အထက်/ အမရပူရမြို့နယ် /မန္တလေးမြို့။
– ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းတွင် marketing ပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ်ရှိရမည်။
– အသက်(၃၅)နှစ်အောက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၅) Sales & Marketing Staff – Male – (5) Posts / လစာ- ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် /မန္တလေးမြို့။
– ဘွဲ့ရ(သို့မဟုတ်)ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
– အသက်(၂၅)နှစ်အောက်သူ ဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ်ရှိရမည်။
– ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၆) Sales&Marketing Supervisor – Male/Female – (5) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
– အသက် (၃၀)နှစ်ဝန်းကျင်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၇) Sales & Marketing Staff – Male/Female – (5) Posts / လစာ- ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် + % / ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် /မန္တလေးမြို့။
– အသက်(၂၅)နှစ်ဝန်းကျင်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၈) Sales & Marketing Supervisor–Female – (5) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်~ ၃၅၀,၀၀၀ကျပ်(ညှိနှိုင်း) / ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
၁၉) Sales & Marketing Staff– Female – (5) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
၂၀) မီးဖိုချောင် အကူ – မ – ( ၅ ) ဦး / လစာ – ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– ကျောင်းကိစ္စ ကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
– သွက်သွက်လက်လက်ရှိ်သူ ဖြစ်ရမည်။
– နေ ၊ စား စရိတ်ငြိမ်း စီစဉ်ပေးမည်။
၂၁) ပန်းကန်ဆေး – မ – ( ၅ ) ဦး / လစာ – ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
၂၂) Security – Male – (5) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– အသက် (၄၀)နှစ်အောက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– အသောက် ၊ အစား ကင်းရှင်းရမည်။
၂၃) Cleaner – Female – (5) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
၂၄) Sales&Marketing Staff – Male/Female – (5) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ကျပ် ~ ၂၀၀,၀၀၀ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ချမ်းမြသာစည်မြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရရှိထားသူ (သို့ ) ကျောင်းကိစ္စ ကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ (၁)နှစ်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၂၅) Store Keeper – Male – (5) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ကျပ် ~ ၂၅၀,၀၀၀ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ (၂)နှစ်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
၂၆) Security – Male – (5) Posts / လစာ – ၁၀၀,၀၀၀ကျပ်(ညှိနှိုင်း) / အောင်မြေသာစံမြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
၂၇) Accountant – Female – (5) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / အောင်မြေသာစံမြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– LCCI Level ( I , II ) အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
– Profit & Loss တွက်ချက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၁)နှစ် အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၂၈) လက်ရေးစာရင်းကိုင် – မ – ( ၅ ) ဦး / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / နေပြည်တော်။
– သွက်သွက်လက်လက်နှင့် သန့် သန့် ရှင်းရှင်းနေတတ်သူ ဖြစ်ရမည်။
၂၉) စားပွဲထိုး – မ – ( ၁၀ ) ဦး / လစာ – ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / နေပြည်တော်။
၃၀) ပန်းကန်ဆေး – မ – ( ၁၀ ) ဦး / လစာ – ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / နေပြည်တော်။
၃၁) စားပွဲထိုး – မ – ( ၁၅ ) ဦး / လစာ – ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / နေပြည်တော်။
၃၂) General Worker– Male – (5) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် / ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
– အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။
၃၃) HR & Admin Supervisor – Female – (5) Posts / လစာ – ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် / ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။
– ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်ရမည်။
၃၄) Sales Staff– Male / Female – (5) Posts / လစာ – ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / အောင်မြေသာစံမြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
၃၅) Marketing Supervisor – Male – (5) Posts / လစာ – ညှိနှိုင်း / ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်/ မန္တလေးမြို့။
– Microsoft Word , Excel , Power Point အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၂) နှစ်ရှိရမည်။
၃၆) Sales & Marketing Staff – Male / Female – (5) Posts / လစာ – ညှိနှိုင်း / ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– အသက် (၃၀)နှစ်အောက် ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– သွက်သွက်လက်လက် ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၁)နှစ် ရှိရမည်။
– ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၃၇) Junior Account – Female – (5) Posts / လစာ – ညှိနှိုင်း / ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– ဘွဲ့ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
– အသက် ( ၃၀ )နှစ်အောက် ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– LCCI Level I,II အောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။
– ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။
၃၈) Site Engineer – Male – (5) Posts / လစာ – ညှိနှိုင်း / ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်/ မန္တလေးမြို့။
– B.E ( Civil ) ဘွဲ့ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
– သွက်သွက်လက်လက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၃၉) General Worker – Male – (5) Posts / လစာ – ညှိနှိုင်း / ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်/ မန္တလေးမြို့။
– အသောက်အစား ကင်းရှင်းရမည်။
၄၀) Marketing Supervisor – Male – (5) Posts / လစာ – ညှိနှိုင်း / ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်/ မန္တလေးမြို့။
– Marketing Diploma များရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
၄၁) Marketing Executive – Male – (5) Posts / လစာ – ညှိနှိုင်း / ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်/ မန္တလေးမြို့။
၄၂ ) Security – Male – (5) Posts / လစာ – ညှိနှိုင်း / ချမ်းမြသာစည်မြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– အသက် (၄၀)နှစ်အောက် ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၄၃) Cleaner – Female – (5) Posts / လစာ – ညှိနှိုင်း / ချမ်းမြသာစည်မြို့ နယ် / မန္တလေးမြို့ ။
– အသက် ( ၄၀ )နှစ်အောက် ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ (၁)နှစ်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၄၄) Sales Supervisor – Female – (5) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ (ညှိနှိုင်း) / ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်/ မန္တလေးမြို့။
– sales supervisor အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၂) နှစ်ရှိရမည်။
– အသက်(၂၅)နှစ်မှ(၃၅)နှစ်အတွင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– ရုပ်ရည်ပြေပြစ်၍ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
– ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် Sales Target ပြည့်မှီအောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
၄၅) Sales Staff – Female – (5) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ကျပ် / ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
– ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
– အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– အသက်(၂၅)နှစ်အောက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၄၆) Helper– Male – (5) Posts / လစာ – ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် / ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် / မန္တလေးမြို့။
၄၇) Marketing Manager – Male/Female – (5) Posts / လစာ – ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်~၁၀၀,၀၀၀၀ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / အမရပူရမြို့နယ်/ မန္တလေးမြို့။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၅) နှစ်ရှိရမည်။
– Construction ပိုင်းတွင် လုပ်ကိုင်ဖူးသူ ဦးစားပေးမည်။
၄၈) Marketing Executive – Male/Female – (5) Posts / လစာ – ၃၀၀,၀၀၀ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / အမရပူရမြို့နယ်/ မန္တလေးမြို့။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃) နှစ်ရှိရမည်။
GAS မန္တလေးရုံးလိပ်စာ – ခြံအမှတ် D4 ၊ သီရိရိပ်သာ ( ၂ ) ၊ ၆၅ လမ်း ၊ ၃၃ လမ်း x ၃၄ လမ်းကြား ၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့ ။
– ရုံးချိန် – မနက် ( ၈:၃၀ ) မှ ညနေ ( ၅:၃၀ )
– ရုံးဖွင့်ရက် – တနလာင်္နေ့ မှ စနေနေ့အထိ ( တနင်္ဂနွေနေ့ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ) ပိတ်ပါသည်။
– ဖုန်းနံပါတ် – 09750108882 , 09750108883 , 09750108884
– Viber – 09750108882 , 09750108883
– Email : mdygasrecruit.hr2@gmail.com ,mdygasrecruit.hr3@gmail.com
– CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် နှင့် မျှော်မှန်းလစာ များကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
– Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
– Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။
-Viber ဖြင့် Reply မပြန်ပါ ။ မိမိ CV အခြေအနေသိရှိလိုပါက 09750108882 , 09750108883 သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့် ။
– လူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့ လာရောက် CV ပေးပို့ပါက အင်တာဗျူး ချက်ချင်း မြန်ပါလိမ့်မယ်ရှင့် ။
– CV တင်သည့်အခါတွင် လျောက်ထားလိုသည့် ရာထူးများကို ဖေါ်ပြပေးရန်လိုအပ်ပါတယ် ။
– သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီပါက တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူး ၀င်ပြီး ဆယ်ရက်အတွင်းအလုပ်ရနိုင်ပါသည် ။
– ၀န်ဆောင်ခပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ ။
2019-08-03 09:27:40 ,Top Myanmar Aluminum Co.Ltd တွ…
Top Myanmar Aluminum Co.Ltd တွင်​ တာဝန်​ထမ်းဆောင်​ရန်​အောက်​ပါဝန်​ထမ်းများအလိုရှိပါသည်​။
(1) Senior Store Account (F)2post
(2) Marketing Executive (M/F)2post
(3) Sales Staff (F)2post
(4) Sale Driver (M)2post
အထက်​ပါရာထူးများအတွက်​ လုပ်​ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရပါမည်။ (13.8.2019)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး CV ကို Microsoft word file (or) PDF file ဖြင့်ပေးပို့လျှောက်ထားနိူင်ပါသည်။ 🎉🎉
Contact Viber 📞📞📞